Party mu manyorero "Hollywood": muchiitiko pamusoro
Home uye Family, Mazororo
Vakawanda vedu hope kanenge kamwe kufamba pasi dzvuku kapeti pasi guru yakawanda nokupenya makamera, chichipenya rimwe rokwe yakanaka kubva akakurumbira mufashoni mugadziri (uyo yedu uye nokuda kwayo akasika), t ake maoko uye zviuru mafeni vachidanidzira dzemarudzi ose kukwazisa ndichivatuma kutsvoda. Asi, sezvazvakanyorwa akatendeuka akabuda, munyika ino chinhu kwete hazvibviri. Kana uchida kunzwa sezvinoita nyeredzi uye panguva imwe chete sei kuti unakidzwe, ronga mutambo kuti zvichaita kukodzera nyaya. For zvinangwa zvakadaro rakakodzera bato sezvinoita "Hollywood", uye sei kuti sangano, uye chero zvazvingava, patichanzwisisa munyaya ino.
Kuti varonge zororo manyorero Hollywood, vanofanira, pakutanga kwezvose, kugadzirira chiitiko shamwari dzake. Nokuti ichi yakanaka kukokwa nenzira yakakodzera vachizvikwidziridza. Somuenzaniso, unogona kuronga navo muchimiro firimu matikiti. Iva nechokwadi kuti unosanganisira panzvimbo yavo uye nguva. Anotaurawo pamusoro manyorero webato, vaenzi vaigona kugadzirira pachine uye sarudza yakakodzera zvipfeko. Fungidzira kuti shamwari dzako achaitwa wakafadzwa agamuchira kukokwa yakadaro.
Kana bato iri manyorero "Hollywood" rakaitirwa pamba, panodikanwa kuti vatarisire dzvuku kapeti. Akaipetenura pamberi pamukova. Ichava yepakutanga uye kusetsa, kana ukabvunza mumwe kutora mifananidzo shamwari uye vaenzi pamukova kubvunzurudza kwavari, vachibvunza kusetsa uye runonyengera mibvunzo. Izvi chaizvo kuyeuchidza akanaka Hollywood uye kunzwa nyeredzi vakokwa.
Inside, isa zvose zvinogona nezvechiitiko firimu. Rongai kumakona zvipo duku, kufanana "Oscar", akusungirire pamadziro mapepa ose Hollywood nyeredzi, vakaisa magirazi pamwe couple vakapararira pamba ose mafirimu vekare, uye kana mukana pachigaro pasirin'i vamwe kupenya balls, naicho yekudyidzana diversifies mhepo. Ndizvo chiratidzo Hollywood kuti zvikuru bato ndiwo akanyorwa kuti inoshongedza mukova kumberi iyi inoshamisa firimu guta - "Hollywood". Yokuturika pamusoro pamadziro, matafura, zvigaro, pamusuo chimbuzi, muchimbuzi, zvarwo, apo chete zvinokwanisika. Iva nechokwadi kuti chokwadi chokuti iye chikapenya (ungashandisa foil kuti chinangwa ichi).
Vanonyatsoteerera masvingo nyeredzi mazita ose vakokwa apo vachava nechokwadi kusiya siginicha wenyu,. Regai uchava "Walk Vakakurumbira" vayo.
Cheerful mumhanzi akakweretwa kubva nomukurumbira Soundtracks kumabhaisikopo, uye multi-mavara zviedza uyewo kuita minimini.
The inonyanya chisarudzo - muchinyatsongwarira manheru nemapfekero yakazaruka decollete uye miswe vanhu. Naizvozvo nyeredzi kazhinji kupfeka hurukuro yamarudzi ose firimu mibayiro. Asi ichi hachisi nekuti huru chezvinonhuwira munhu Hollywood webato - chivheneke uye zvoumbozha. Shandisa zvokufungidzira yenyu, nokuti unogona vapfeke ari zvokupfeka gunsteling firimu vatambi Somuenzaniso, muna James Bond kana Indiana Jones. Vaya vanoda mabhaisikopu 60-70s anogona kupfeka yakajeka madhirezi, magiravhusi, kuti catchy vakaita lipstick piriviri lipstick, uye vakauya miseve iri meso. Somuenzaniso, unogona kushandisa yakakurumbira mufananidzo Marilyn Monroe, akapfeka rokwe jena uye wigi chena. Vasikana havafaniri kukanganwa zvishongo uye nenhumbi. Hapana chikonzero nokutorera ane zvishongo chitoro, nekuti unogona kutenga uye zvishongo. Fans ose renyaya kuchaita zvienderane outfits kubva firimu "The Fifth Element" kana "Star Wars." Pasinei koshitomu Muchazvinhonga kumusoro, sezvo bato iri manyorero "Hollywood" rinoreva avo outfits vari chero nzira chokuita kufirimu.
Kana ukasarudza kupemberera zuva rokuberekwa wako mumagadzirirwo "Hollywood", tafura anofanira Rongai tsvuku kana yendarama machira uye makuru mahwendefa chena. Kazhinji, panguva mubairo nyeredzi haana kugara patafura. Kakawanda, vari vakabata magirazi pamwe Champagne uye kutaura, saka zviri zvikuru zvichakubatsirai kuronga retafura siyana nezvikafu zvishoma Somuenzaniso, ngazvive chizi nezvikafu zvishoma, maorivhi, michero yamarudzi ose, profiteroles, mousses, miriwo salads, makeke, chokoreti wakafukidzwa mastrawberry, couple, etc. . d. Kana zvokunwa, unogona kushandisa cocktaileja ( "Bloody Mary," "Manhattan," "siyana", "Martin", "Tom Collins") uye Champagne. Zviri nani kana zvamunomutarisira ari hweta anomushandira kunwa kune vaenzi.
Kana uchizopa kuroorwa uye handizivi kuti zvangu kukwira kupemberera yako, saka zvakanga zvisiri chinhu chakafanana, zviri kumuchato manyorero "Hollywood" - zvaunoda. Uyu zvikuru pfungwa yepakutanga achafara kwete chete vakakokwa, asi vakanga vachangobva kuchata.
Chokutanga, kugamuchira shamwari dzako uye mapepa mhuri kuti zvichaita kuenzaniswa yasarudzwa dingindira Somuenzaniso, imwe Positikadhi mufananidzo "Oscar" kana Hollywood firimu magamba. Unogonawo kusika fadza kukokwa, gluing navo uta kana kwakajeka ibwe kulonchiki. Kazhinji, vanoratidza fungidziro - uye muchato wako manyorero "Hollywood", iro Pfungwa yokuti izvo zvinoda kugadzirira, chichava soro chechetere.
Muchato sezvinoita "Hollywood" chairevei uye zvakakodzera zvipfeko romwenga. Saka, Somuenzaniso, unogona kupfeka-njuzu rokwe anofambirana siluetti zvose kumabvi, uye mberi Washington diverges. hembe iyi inoti pamusoro rakasiyana mwenga wake zvechikadzi wemashiripiti.
Unogona kungotora rokwe ari Retro style ine zvakawanda siketi uye kuwedzera rakajeka nenhumbi, akadai ngowani, magiravhusi uye yakakwirira.
Chinhu chikuru Hollywood mwenga mumapfekero - muumbozha. Dress anofanira vasonanidza kubva machira anodhura uye yakashongedzwa nemabwe anokosha uye mangoda. izvi outfits mutengo rinotanga pa $ 1000 uye anogona kupera "nth" chitsama, asi chinangwa chacho sezvinoita "Hollywood."
Munhu anofanira kupfeka netirauzi pamwe suspenders, hembe, nguvo, inopenya shavishavi, bvumidzwa matehwe shangu, jasi uye hat. The chikuru ndechokuti ake zvipfeko vachiwirirana parutivi mwenga.
Zvikuru dzakakodzera pachake iri nyaya iri URA pamwe Tuning Style 50s Somuenzaniso, "cadillac" kana "Rolls-Royce." Zvisinei, kurenda motokari rakanyatsojeka anodhura ($ 150 paawa), asi kamwe wasarudza musoro Hollywood, zvakafanira kuti vaite maererano nazvo.
Bridal bouquet inofanira rinoumbwa goridhe, maruva matsvuku kana machena, zviri nani kushandisa basa nyanzvi Senda. Mhete ngachibikwe chena nendarama, uye pamusoro pamabwe chiwanikwa, chete Usaita izvozvo, zvikasadaro zvichaita vosiya waenda chose.
Photo Purogiramu - chinhu chinokosha "Hollywood" wako muchato nokuti "paparazzi" anofanira kuva pamusoro nokukunda kwenyu kwose kwose. Panoperera muchato, unogona pagomo rimwe firimu wako kupindura.
Graduation sezvinoita "Hollywood"
Uyu kumbonyanya yakajeka mazororo havazosiyi kuroorwa hanya uye achagara mumwoyo chizvarwa chevechiduku upenyu.
Kamwe kudzidza kusvika vakatozodzokera, vanofanira kusangana kapeti uye mijenya pamusoro paparazzi vachange mukakachurwa makamera avo kubva pose uye kubvunzurudza navo. Pasi, swedera nyeredzi mazita mumwe akapedza kudzidza.
Somunhu varaidzo mibayiro mhemberero dzinogona kurongwa, apo mumwe nomumwe anofanira paakavapa inenge "Oscar". Mushure mhemberero paruvanze zvaifanira kuridzwa ruzha nokuombera maoko kune vakawanda vanokwanisa kudzidza sokuti kupemberera zororo.
Sezvo mabiko zvinokosha kuronga retafura siyana chinonhuwira nezvikafu zvishoma uye dzisiri chidhakwa cocktaileja, yakashongedzwa muna Hollywood manyorero.
Nziyo anofanira kusarudzwa kubva vanozivikanwa mafirimu. Apo bato iri manyorero "Hollywood" vachange kusvika kumugumo, unogona vakwanise mumwe akapedza kudzidza kuita nhaurwa inopedzerwa vachiti bhayibhayi kuchikoro uye vadzidzisi.
Pakurwisa pamusoro Hollywood bato
makwikwi ichi zvakakodzera zviitiko zvose, kusanganisira New Year mumagadzirirwo "Hollywood". Nokuti mumwe nomumwe vakakokwa kutenga nyeredzi diki chete Velcro kana kuvaita pachako. Vanonyora zita chero yakakurumbira mutambi kana mutambi. Kamwe zvose zvakasimba kunwa uye kudya pamusoro musana akakokwa Trailers kubudikidza asterisks. Zvadaro, mumwe nomumwe vaenzi zvokufungidzira ane zita rakanyorwa pamusoro nyeredzi yake. Kuti aite izvi, anofanira kubvunza zvose vaitungamirira mibvunzo yakadai sokuti, "Uyu mukadzi?" kana "Uyu mutambi ano?". Hall vanofanira chete Unogutsurira musoro uchiti kana nokudzungudza musoro wake, kupindura mibvunzo yakabvunzwa.
Mumwe nomumwe vaenzi mumaoko kubva machira ane nominations pamwe neizvi divi chete vakokwa havana kuona kuti nharaunda ivo sarudza. Mushure vose vakakokwa vanyore mazita avo, mashizha anofanira kugara mahamvuropu. Mangoti vaenzi adye zvakasimba, kudzoka mahamvuropu, zvichizoita kuti kuverenga pamberi vose, uyo akava nomination. Nditende, zvichava kusetsa chaizvo kana vamwe babamukuru guru kukunda muboka "Best gait gore." Kana waronga kuti Birthday sezvinoita "Hollywood", pano unogona hope Somuenzaniso, vachiziva kuti sarudza vaenzi shoma iri nomination "Munhu Best Pagore" uye kuhwina, ukuwo, anofanira rokuberekwa.
Inotevera makwikwi zvakare akakodzera kune yemakambani manyorerwo "Hollywood". Kuti aite izvi, tora mashizha iri mari yakaenzana nokuwanda vaenzi. On nomumwe kunyora "cinematic mazano", akadai kuchema Tarzan, kana kufarira mutsara kubva rwiyo nokuda Marilyn Monroe. muenzi nomumwe achafanira kuti ndikadzura rimwe shizha uye kuita zvinorondedzerwa pairi.
Party mu manyorero "Hollywood" haangaupfuuri pasina chinotyisa, sokuziva, chero munhu achida kuita chinhu kuti vatungamirire basa firimu. Kuti aite makwikwi yokusarudzira mugadziri, ngakurege kuva rokuberekwa kana murume (kana muchato). The mugadziri uti kuti kuita chimwe kana mumwe muenzi kuti nyeredzi firimu rake. Somuenzaniso, kuti aratidze kuti kurwa Dzhekki Chan kana Vader akati. Zvichava kunakidza chaizvo.
Sezvinogona kuoneka kubva apa, bato iri manyorero "Hollywood" Muchiitiko zvinogona kuva zvakasiyana-siyana, chimwe chezvinhu anosetsa uye kujairika. Naizvozvo, ivai fungidziro yako uye unakirwe neshamwari dzako uye mhuri.
Chii chinogona kuitwa naamai musi March 8 pamusoro Kadhi
Rudzii mitambo unogona kuridza patafura?
Birthday kwaziso (Makore 13 okuberekwa) musikana. Chii kupa?
Zviratidzo Day Love Valentine kwakaita
Makorokoto hanzvadzi kana iye ari kure
Rongai zororo nyore!
Motor chitofu repair, yokutsiva
Kushandisa 'Aflubin "vana: okuti
Terms mashandisiro yokugara musha
Dzakawanda nzira yokuswedera gouache
Horse shambuu nokuti bvudzi kukura nevanhu
Sintiya Nikson (Cynthia Nixon): Filmography uye upenyu pachavo pamusoro mutambi (Photos)
Hurumende basa kuti kunyoresa IP: kukura muripo nzira
Inventory zvinhu uye nhoroondo dzavo
Nzira yekushandisa juice processor: nhanho neshato mirayiridzo
"Ini zita rake Feriha": vatambi, mabasa uye zvinonakidza zvinhu
"Kalina", kuti kutonhora maitiro: Mhaka uye kuvandudzwa
Sei pickle makabheji pamwe bhero pepper?